Ungalicima njani iqela le-WhatsApp ngonaphakade | I-Androidsis
Amaqela abe yinxalenye ebalulekileyo yeWhatsApp. Uninzi lwabasebenzisi bayinxalenye yencoko yeqela kwi-app, nangona utshintsho luziswa malunga noku, indlela yokwala izimemo. Kungenzeka ukuba kukho iqela obenalo elingasasebenziyo. Ke ngoko, kule meko, kungcono ukucima iqela ngokusisigxina. Ingenziwa njani le nto?
Into enokubakho ngabasebenzisi abangaziyo, yiyo loo nto amaqela kuWhatsApp asuswa kuphela xa kungekho mntu ushiyekileyo ngaphakathi efanayo. Ngale ndlela, ukuba sineqela ekungekho namnye kulo, siya kuba nakho ukuqhubeka nokususwa kwalo. Inkqubo ngokwayo ayinzima kwaphela.
Kwiinyanga ezidlulileyo siyibonile indlela i-app yemiyalezo eyenze ngayo inkqubela phambili kwiingxoxo zeqela layo, indlela yokuphucula iifowuni zeqela. Ukuzenza zibe lula. Nangona uninzi luphulukana nokwenzeka kwe-eukunciphisa incoko yeqela ngokufanelekileyo. Ngethamsanqa, ikhona indlela yokuphelisa iqela, nangona kukho uthotho lwamanyathelo ekufuneka wenziwe kwangaphambili.
Kule meko, kubalulekile ukuba ungumlawuli weqela ekuthethwa ngalo. Ngaphandle koko, awuyi kuba nakho ukuqhubeka nokususwa kweli qela ku-WhatsApp. Ukuba awunguye umlawuli kuyo, ekuphela kwento onokuyenza kukushiya elo qela kwaye ucime incoko kwimbali yakho yencoko. Kodwa into esiyifunayo kule meko ikhethekileyo kukususwa ngokupheleleyo kweqela. Ke ngoko, kubalulekile ukuba umlawuli ofanayo ayenze.
Cima iqela kuWhatsApp
Njengoko besesitshilo, kwimeko kaWhatsApp kuphela ngumlawuli weqela, okanye abalawuli kwimeko apho baninzi, abanethuba lokususa iqela, xa kungekho mntu kulo. Iqela kufuneka liphulukene nawo onke amalungu alo ukuze kube nakho ukucima usetyenziso. Ke ngoko, Okokuqala kufuneka ugxothe bonke abantu abakulo, okanye bayalishiya iqela.
Nangona sisenokungafuni ukulinda abasebenzisi ukuba balishiye iqela ngokwabo. Ke ngoko, into ekufuneka uyenzile kukungenisa iqela ekubhekiswa kulo kuWhatsApp kunye emva koko faka ulwazi lweqela. Kweli candelo uya kuba nakho ukubona bonke abantu abayinxalenye yalo ngendlela elula. Emva koko, kufuneka siwasuse onke amalungu eqela kwiqela. Ukuba liqela elinabantu aboneleyo, ngumsebenzi odikayo, kuba inye kuphela umntu onokupheliswa ngexesha. Into ekufuneka i-app iyiphucule kwikamva.
Umbono kukuba wonke umntu uyasuswa kwiqela, kude kube kuphela ngumlawuli ohleli ngaphakathi kweli qela lengxoxo. Ke, xa oku kusenzeka, kuxa isicelo semiyalezo siza kuvumela ukupheliswa okuqinisekileyo kweqela elichaphazelekayo. Ke ngamanye amaxesha kungathatha imizuzu embalwa ukuba baninzi abantu abakweli qela kuthethwa ngalo. Xa zonke zisusiwe, kuya kufuneka ubuyele kulwazi lweqela kuWhatsApp.
Kuba sele ungowokugqibela ukuhamba, emazantsi uyabona ukuba kuhlala kukho iindlela ezimbini. Enye yazo kukushiya iqela kwaye enye kukuxela iqela. Kule meko, kuya kufuneka ucofe ukushiya iqela. Emva koko, siza kubuzwa ukuba ngaba ngokwenene sifuna ukuphuma kuyo. Ukuba yeyokugqibela nokuba ngumlawuli ofanayo, emva koko kubonakala iwindow apho kuWhatsApp izakusibuza ukuba siyafuna na ukucima eli qela. Kufuneka nje ucofe olu khetho. Eli qela liya kususwa ngokusisigxina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungalicima njani ngokusisigxina iqela kuWhatsApp